Obodo Edirne na-akwado oru Eurasia Road - RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara22 EdirneObodo Edirne na-akwado oru Eurasia Road
12 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 22 Edirne, General, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey 0
obodo edirne na-akwado ọrụ Eurasia
Lycian Way na Turkey, Evliya Celebi Way na Phrygian Road dị ka ọtụtụ akụkọ ihe mere eme na omenala ụzọ ụkwụ kwadebe Turkey Cultural ụzọ gasị Association rụrụ, "Eurasia Road" Edirne Municipality nke sonyere na oru ngo ga-eme ka nkwalite nke obodo ahụ dị ka nke ọma dị ka na-eme ka ọrụ ahụ.
mwube nke omenala pụrụ isiwo Turkey, nke bụ maka mmezi na nkwalite nke Cultural ụzọ gasị Association (CRA), n'ebe ugwu Gris na Balkans site Turkey ka Italy ejikọta ókè na cross-omenala ụzọ gasị maka Certifying Yurop Road na-ezo aka na European Council na-aga n'ihu na-akwadebe maka. Ndi isi obodo Edirne so kwa n’etiti ndi sonyere na oru a bu nzido mmeghe na Istanbul.
Ihe oru ngo a gara n'ihu na nleta nleta na ndi Italy ka ha nweta uzo ndi Europe. Ihe mmemme ahụ malitere site na iji ụtọ nri ndị obodo na achịcha ọdịnala obodo a na Monte Sant'Angelo wee gaa n'ihu na nleta ebe ndị ogbu anụ akụkọ. Ndị niile sonyere nwere ohere iji ụkwụ gaa n'akụkụ ndịda nke ụzọ ọdịnala Via Francigena yana yana oke osimiri n'ụbọchị dị iche iche. Zọ ndị a na-aga n'okporo ụzọ bara ezigbo uru maka ịnwekwu ụzọ nso. Enwekwara nzukọ na ndị nnọchianya nke EAVF na Mahadum Bari, ebe a na-ekerịta omume ọma.
Obodo Bursa Nilufer kwadoro ọrụ ahụ. Civil Society Dialogue n'etiti Turkey na EU (SCD-V) oru ngo na-akwado Grant Mmemme, Misia e tabled maka ụbọchị abụọ. European Via Francigena Association of Municiparies and Associations from Italy, “Chọpụta Eco gị” Hiking si na Gris, gn Egnatia Road ”na“ Sultans Road ”ntọala, Albania't Tirana Express” Art and Culture Association, Istanbul Ndi otu ndi “Hiking Istanbul” ndi nnochite anya nke “ofzọ nke Ndidi enwetara site na Izmit, yana ndi isi site na Edirne Municipal na Izmit Municipality sonyere na oru a.
N'ime ogo nke ihe omume ahụ, ndị ọbịa nwere ohere iji hụ ụzọ site na ịgafe n'okporo ụzọ Mysia nke kilomita 9,5. N'ime usoro ihe omume a, ndị sonyere ahụ gara Misi Village Development na vlanahụ Njikọ, Nilüfer Misi Women Culture na Solidarity Association na Atlas Village Women Solidarity Association. Mgbe njem ahụ gachara, ndị ọrụ ngo ahụ gara na Exchange House na agbata Görükle, mpaghara Nilüfer na Bursa Lausanne Exchange of Culture and Solidarity Association.
Ihe oru a Yüşrüyüş ije na Eurasian Road Roadn bu 5 nke Mmemme Ogbako Oha nke ndi mmadu, nke ndi European Union na-akwado, ikike nkwekorita bu ndi isi ego na ndi nkwekorita ma obu ndi isi ochichi EU na nke ndi isi ochichi nke ndi oru. O so na oru ngo enyere ndi mmadu onyinye a n’ime oge niile. Applictù Ndị Ọrụ Ọchịchị nke ulturalzọ Ọdịbendị (KRD) na-arụ ọrụ a na mmekorita ya na European Via Francigena Association (EAVF) na andtali na Association maka Tracing gburugburu na Gris (TYE).
Konya Metropolitan Municipality Nkwado maka Aladağ Ski Center Project 29 / 01 / 2014 Konya Metropolitan Municipality Nkwado maka Aladağ Ski Center Project: Mayor nke Konya Metropolitan Municipality Tahir Akyürek kwuru na ha ga-achịkọta ọrụ nke obodo na mmejuputa nke Aladağ Ski Center Project. N'ihe banyere ntuli aka obodo, Akyürek gara n'obodo Düzözü, bụ ógbè Derbent. Akyurek kwuru na Derbent ga-aghọ mpaghara etiti na obodo Metropolitan Municipality Law na kwuru na ọ na-eso ọrụ ndị e mere na mpaghara Derbent. Akyürek, "Derbent Mayor Hamdi Acer, Turkey bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa skai emmepe mbọ ka ebe a. Anyị ga na-arụ ọrụ na na. Municipalities ikike president na anyị metropolitan'll ojiji n'ebe a. Metropolitan Municipality ...
Edirne Municipality Traffic Sign Arrangement 21 / 01 / 2015 Nhazi okporo ụzọ Edirne: Edirne Obodo, Cumhuriyet Primary School na àkwà mmiri dị n'agbata àkwà mmiri na Tunca mgbe agbachara akara ndị dị mkpa kwekọrọ n'ụgbọ okporo ụzọ abụọ. Ederede Edirne Municipal Services Direction na Nkwupụta Edemede, "obodo anyị, owuwu nke àkwà mmiri ọhụrụ ahụ na Osimiri Tunca n'ụzọ a ga-esi rụọ okporo ụzọ njikọ iji hazie àkwà dị n'etiti thelọ Akwụkwọ Primary Republic na akwa dị n’etiti usoro okporo ụzọ abụọ nke ụgbọ ala dabara na akara ndị dị mkpa. , ihe ịrịba ama na -eme ka ọ ga-elebara anya.
Nkwado site na Izmir gaa na Izmir Coast Coast Road Tramway 14 / 11 / 2012 Nkwado nkwado maka Izmir si Sahil Yolu Tram line project came from France. Nkwado dị ịtụnanya maka ọrụ ụgbọ mmiri Coastal Road Tram, nke obodo Metropolitan mepụtara iji mee ka njem ụgbọ mmiri dị n'obodo ahụ ma nye ndị Izmir aka izute oké osimiri, si France bịa. Nkwado nke ukwuu maka 'Coastal Road Tramway project' nke Izmir Metropolitan Municipality (IMM) mepụtara iji mee ka njem ndị njem dị na Izmir dị mfe ma hụ na ndị Izmir nwere ike izute oké osimiri si France. Ụlọ ọrụ French Development Agency (AFD), bụ nke kwadoro ọrụ ụgbọ njem na Istanbul na Kayseri ka ha na-emekọ ihe ugbu a, emeela ka ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri na-eme na Izmir. Na-ekwuputa na ha akwadola ọtụtụ ọrụ ruo ụbọchị, AFD Ndị isi obodo ...
Taa na History: 4 October 1971 Pehlivanköy-Edirne-Kapıkule akara meghere na Istanbul-Edirne akara e meghere na 229 km ... 04 / 10 / 2015 Taa 4 October 1860 Constanta-Cernova (Boğazköy) e meghere na akụkọ ihe mere eme. Igodo malitere. (64,4 km.) 4 October 1872 Haydarpasa-Tuzla akara, nke bụ akụkụ mbụ nke okporo ụzọ Haydarpasa-Izmit, e dechara na ọnwa 14 wee malite ịme ememe. 4 October 1888 Deutsche Bank, nke Georgevon Siemens na-eduzi, enwetawo ihe ùgwù nke ịgbasa na Haydarpaşa-İzmit Line na Ankara. Ihe ikike ikike a bụ afọ 99 na oge iwu ahụ bụ afọ 3. Deutsche Bank zụtara eriri Haydarpaşa-Izmit na 6 nde Frank. Edere nkwekọrịta mgbazinye aka n'etiti Minista nke Ọha Ọha Zihni Pasha na Dr.Alfred Kuala, otu n'ime ndị isi nke Stutgard-vvürtembergissche Vereinsbank. Ụbọchị nke ndenye ego bụ 30 September 1888. İm
Taa na History: 4 October 1971 Pehlivanköy-Edirne-Kapıkule akara meghere na Istanbul-Edirne akara ... 04 / 10 / 2013 Taa 4 October 1860 Constanta-Cernova (Boğazköy) e meghere na akụkọ ihe mere eme. Igodo malitere. (64,4 km.) 4 October 1872 Haydarpasa-Tuzla akara, nke bụ akụkụ mbụ nke okporo ụzọ Haydarpasa-Izmit, e dechara na ọnwa 14 wee malite ịme ememe. 4 October 1888 Deutsche Bank, nke Georgevon Siemens na-eduzi, enwetawo ihe ùgwù nke ịgbasa na Haydarpaşa-İzmit Line na Ankara. Ihe ikike ikike a bụ afọ 99 na oge iwu ahụ bụ afọ 3. Deutsche Bank zụtara eriri Haydarpaşa-Izmit na 6 nde Frank. Edere nkwekọrịta mgbazinye aka n'etiti Minista nke Ọha Ọha Zihni Pasha na Dr.Alfred Kuala, otu n'ime ndị isi nke Stutgard-vvürtembergissche Vereinsbank. Ụbọchị nke ndenye ego bụ 30 September 1888. İm
Onye isi ochichi Bircan, Edirne ụgbọ okporo ígwè dị elu na-ahapụ isi mmiri ọzọ 16 / 12 / 2015 Edirne Deputy Bircan, Edirne ọzọ spring-ọsọ ụgbọ okporo ígwè na Edirne osote onye ị Bircan Edirne Edirne ugboro ugboro, sị na ọ yigharịrị ọzọ ruru ụbọchị maka elu-ọsọ ụgbọ oloko bụghị malitere a ụdị mmepụta nyere nri, ọ sịrị Turkey ebu Grand National Assembly burukwa. Erdin Bircan, Minista Transport, Maritime Affairs na Communications Binali Yildirim, na-enye nsogbu ederede site n'ịjụ oge oge ụgbọ okporo ígwè Edirne ga-arụ ọrụ. Prime Minister Recep Tayyip Erdogan Bircan echetara anyị nke antebellum oge nke ahụ e nyere na-agba ụgbọ oloko si, "Prime Minister Ahmet Davutoglu bụ anọgide na-enye elu-ọsọ okporo ígwè site ọ bụla na-eje ozi kwuru na Edirne Edirne, karịsịa," ka o kwuru. The amaghị ...
Ka ọ dịgodị, Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọdịnihu Dị Ukwuu gbanwere anya 20 / 10 / 2016 O bu ihe omuma nke ulo oru AK na-eme ka anya ya gbanwee anya: AK Party Edirne Province President Ilyas Akmeşe, ekele maka oru uzo di elu iji mee ka ndi mmadu nwee ike ibugharia ngwa ngwa na Edirne kwuru na a ghaghi itinye ihe ndi ozo. Ọ tụgharịrị anya na Project High Speed. Onye isi oche nke AK Party Edirne, Ilyas Akmeşe "Edirne ga-atụkwasị ọnụ na ya," ka o kwuru, karịa ihe niile ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ ka ọ gaa Edirne iji wepụ ikike nke ndị bi na ya dọọrọ uche gaa n'ihe ndị dị mkpa. Ilyas Akmeşe, Onye isi oche AK Party Edirne, bụ ezigbo ọrụ maka Edirne, ...
Mayor Gumuscuoglu kwadoro ọrụ elu ugwu na Sis Mountain 29 / 05 / 2013 Foogu Mountain cable ụgbọ ala oru ngo na-akwado President nke Gümrükçüoğlu Trabzon Mayor Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, ha kwuru na ha ga-akwado büyükşehirl njem oru ngo ga-mepụtara ọnụ. Şalpazarı district Gị na Mayor Fehmi Cengiz Gümrükçüoğlu ṅụọ tii na ụmụ amaala chatter President, ga-aga na ọrụ n'ógbè dị otu square mita, gụnyere dị larịị na büyükşehirl o kwuru. Şalpazarı Mayor Echiche Fehmi Cengiz, n'ógbè bụ otu n'ime ihe dị mkpa ndị njem nleta ebe foogu Mountain Gümrükçüoğlu arịrịọ nkwado maka eme skai inwego, "Ọ bụrụ na a ezi njem na iga oru ngo emi odude ke cable ụgbọ ala mgbe mere na oru ngo na na isi. Foogu Mountain mgbe Metropolitan na ụgbọ ala ụgbọ ala '
Nkwado site na akụkụ mmegide ahụ na Ngalaba Mgbochi 17 / 04 / 2015 Nkwado na Project Ropeway site na Ngalaba Mgbochi: Akuko a na-agbakwụnye banyere atụmatụ atụmatụ mgbakọ ahụ maka ihe eji eme njem obodo ukwu nke Bursa Metropolitan nabatara. Emere nzuko nke April nke Obodo Metropolitan nke Bursa na nzuko nzuko nke ndi isi nke ndi ochichi, n'okpuru ndi isi nke Atilla Borc. Ná nzukọ mgbakọ ahụ, a chọrọ nkwenye nke ọrụ ahụ maka ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-akwado otu nkwado site n'aka ndị CHP na ndị ndụmọdụ MHP. CHP Group SözcüSuleyman Erdal Aktug kelere Metropolitan na ụgbọ ala ụgbọ elu ma kwuo, sị, Site na ikuku gaa n'otu mpaghara nwere okporo ụzọ dị warara, ebe Uludağ siri ike iru ya
Nkwado site na Tanrıverdi ruo n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè Spil 25 / 08 / 2015 Spiller ugwu cable ụgbọ ala oru ngo na-akwado Tanrıverdi'ye: MKYK so na AK Party Huseyin Tanriverdi, ngo ga-adị njikere ime ka skai abọli Spiller National Park mara ọkwa na ha ga-akwado Ankara. AK Party Manisa Deputy Huseyin Tanriverdi na mbụ AK Party isi Mayor Omar Faruk Celik, mere kwuru na Spil Mountain National Park. Forest Tanriverdi anya ulo-ǹdò, ọrụ a ga-eme iji zọpụta Spil Mountain National Park aghọwo ihe dị mkpa center n'elu ẹkụre. Spil Mountain Tanriverdi kwuru na Turkey nanị mba park zubere ebe nke mba ogige, "Anyị bụ ndị na National Park, National Park zubere na Turkey. E mechaala ogige ahụ ka ọ dị nso
Obodo nke Edirne
Uzo Evliya Celebi
Okporo Mzọ Mysia
Konya Metropolitan Municipality Nkwado maka Aladağ Ski Center Project
Nkwado site na Izmir gaa na Izmir Coast Coast Road Tramway
Taa na History: 4 October 1971 Pehlivanköy-Edirne-Kapıkule akara meghere na Istanbul-Edirne akara e meghere na 229 km ...
Taa na History: 4 October 1971 Pehlivanköy-Edirne-Kapıkule akara meghere na Istanbul-Edirne akara ...
Onye isi ochichi Bircan, Edirne ụgbọ okporo ígwè dị elu na-ahapụ isi mmiri ọzọ
Ka ọ dịgodị, Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọdịnihu Dị Ukwuu gbanwere anya
Mayor Gumuscuoglu kwadoro ọrụ elu ugwu na Sis Mountain
Nkwado site na akụkụ mmegide ahụ na Ngalaba Mgbochi
Nkwado site na Tanrıverdi ruo n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè Spil